Imfuyo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Izingulube ze-vietrubry zase-Vietnamese
Ama-pig namuhla yizilwane ezifuywayo kakhulu ezidumile. Kungani kungenjalo? Uma uzalisa izingulube, usuke unamafutha, inyama, okuyinto empeleni ayiyona ingane kubantu abaningi. Ngalokhu konke kulezingulube, ungathola futhi. Kodwa, ngaphambi kokuba unqume ngesinyathelo sezingulube ezizalisayo, ngaso sonke isikhathi kukhona umbuzo ophikisanayo: yikuphi ukuzalwa okumele ukhethe?
Yiziphi izingulube eziphilayo: zijwayele izinhlobo ezikhiqiza kakhulu
Ngokuvamile izingulube zivuswa ukuze zikhiqize amafutha. Kodwa nokho, inyama yengulube ayinalutho olunomsoco futhi unambitha. Ingulube isetshenziselwa ukupheka izitsha eziningi ezivela emhlabeni wonke, amaSulumane kuphela awadli. Ethandweni, liphikisana nenkukhu, kodwa lokhu okuncane kuncane kakhulu kunyosi yengulube.
Izici zokubamba inkomo ngokuthola uketshezi oluphezulu lobisi
Ukugcina inkomo endlini kunenzuzo enkulu, njengoba lesi silwane singayithokozisa umndeni wonke ngemikhiqizo yobisi ewusizo. Kodwa-ke, ukuze ubathole kubalulekile hhayi kuphela ukukhathalela nokondla isilwane sakho, kodwa futhi ubisi ubisi kahle. Kungabonakala - indaba elula, kodwa inani lobisi kanye nesimo jikelele somzimba wenkomo zixhomeke kakhulu endleleni yokukhwela.
Uhlobo olubomvu lwezingulube
Phakathi kwenani elikhulu lezinkomo zengulube kunzima ukuthola lezo ezizofaneleka kokubili uhlobo lokusebenza, ngezimo zokujwayela isimo sezulu, kanye nokudla okudingekayo. Ngakho-ke, ngaphambi kokuqala ukukhetha okunjalo, ekuqaleni kufanele uhlolisise amakhono akho nezidingo zakho, bese uhlola kuphela uhlobo ngalunye ngezici zalo ezihlukile.
Ukuzaliswa kwezingulube zasekhaya: ukuqala kuphi ukufeza imiphumela ephezulu?
Ukuthola ingulube entsha nekhwalithi ephezulu ekhaya akuyona inzima kakhulu. Ngaphezu kwalokho, abantu abaningi baya esinqumweni sokubamba iqhaza ekukhuleni kwezingulube, ikakhulukazi uma behlangana ngokuphindaphindiwe namafake inyama futhi "hhayi imikhiqizo yokuqala". Ngakho-ke, okuhlangenwe nakho kwezilwane ezifuywayo ezifuywayo sekuye kwaqoqwa kakhulu, okwenza kube khona ngisho nasesiteji somqondo ukuba uqeqeshwe kahle, futhi ukutadisha izinzuzo nokuziqhenya ekukhuliseni izingulube.
Isilwane esinjalo sezolimo njengenkomo sekuyisikhathi eside sibhekwa njengomuntu onakekela zonke izizwe. Kwamanye amazwe, lesi silwane singabonakala kumatshwayo wombuso. Futhi eNdiya, ngokuvamile, inkomo ibhekwa njengesilwane esingcwele. Esikhathini samanje kunezinhlobonhlobo zezinkomo eziningi. Lezi zilwane azikhuliswa nje kuphela ngemikhiqizo yobisi, kodwa nangokwenyama.
Amazwe ethu anemifula namadlelo amahle kangaka, isimo sethu sezulu sinomoya omnene, futhi konke lokhu kusho ukuthi akukho ukuphikisana kwezinkomo zenkomo ezikhulayo. Le mboni ayilethi inzuzo encane kubanikazi bayo. Ukuze ukwandise izinkomo inyama akudingi izindleko ezinkulu. Kunezinhlobonhlobo eziningi zezinkomo zenkomo, kodwa kulesi sihloko sizokutshela mayelana nezinkomo ze-Shorthorn.
Uhlobo lwezinkomo zaseBrazil lwaseBroatia
Emadolobhaneni abahlali bendawo, isilwane esivamile kakhulu inkomo. Ungacabanga nge-zoo lapho izilwane ezifuywayo zigcinwa khona: inkomo, imbuzi, ingulube nezinye izilwane. Ezweni, kusekhona i-zoo enjalo. Itholakala e-Federal Republic yaseJalimane; izingane ezinjengalezi zoo eziningi, ngoba kwabanye, i-zoo enjalo inikeza ithuba lokubona izilwane zasemapulazini okokuqala.
Ukondla izingulube: senza ukudla okuhle kakhulu futhi sikhethe ubuchwepheshe obufanele.
With igumbi, izinsiza kanye nomdlandla, kulula kakhulu ukukhulisa izingulube ekhaya. Kodwa-ke, noma ngabe wenze isinqumo esinjalo, okokuqala kuzodingeka unakekele ukuthi yini okumele ukondle izilwane ezifuywayo. Emva kwakho konke, nakuba lesi silwane singeke siphume ngokudla okunikezwa kuso, uma ufuna ukuthola umphumela ophakeme, kuzodingeka wenze ukudla ngokucophelela.
Imfuyo enhle kakhulu yezinkomo: ziyini?
Abamele izinkomo baye bahlala ekhaya isikhathi esithile. Emagcekeni amaningi emadolobheni ungabona izinkomo ezimbalwa, ezithandwa kakhulu ngabanikazi babo. Kuze kube manje, izinhlobo zezinkomo ezingaphezulu kwezingu-1200 zibhaliswe emhlabeni, kodwa phakathi kwazo kukhona umehluko phakathi kobisi, inyama kanye nobisi, nezilwane zenyama.
Ubisi yilo mkhiqizo lapho ukuphila kwethu kuqala khona. Iyakwazi ukudlulisela zonke izingxenye ezidingekayo zokuphila nokuthuthukiswa. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi abakhiqizi abaningi bemfuyo bazalisa izinkomo zobisi. Izinkabi ezinjalo, ngisho nalapho zigcinwa mahhala, ziyakwazi ukujabulisa amakhosi azo ngezithelo eziphakeme kakhulu zobisi oluhlwabusayo nolunamafutha.
Izinhlobo ze-TOP-7 zezinkomo zobisi
Ukuthenga inkomo yobisi akuyona into elula. Kule ndaba, kungcono ukuthola ulwazi oluningi ngangokunokwenzeka mayelana nezinhlobo ezinhle zezinkomo ezidalwe ngokukhethekile ukuthola ubisi kubo. Kumele futhi uhlolisise ubisi lwezinhlanga ezikhethiwe. Kungcono ukuthola ukuthi yiziphi izinhlobo ezifakwe emabhizinisini asezindaweni zezolimo, futhi ukuthenga inkomo yezinhlobo ezizalwe lapho.
Cash cow: kanjani ukondla isilwane
Ngaphambi kokuthenga izinkukhu zenkomo yobisi, kubalulekile ukuthola ukuthi yiziphi izinhlobo zokudla izinkomo okudingeka zinikezwe, ngoba kuxhomeke ekudleni, ngokwezinga elikhulu, inani lobisi elingadliwa yisilwane. Ukudla okunomsoco kudla indima ebalulekile ekugcineni ukugcina umsebenzi wokuzala.
Indlela yokondla kahle izinkomo
Uma uthenga izinkomo ezincane noma isilwane esisikhulile kakade, ngokuqinisekile ufuna ukuthola imiphumela ngesimo somkhiqizo nemikhiqizo yobisi. Ukuze uthole ukukhiqiza okwanele, izinkomo kumele zondliwe kahle. Kodwa kunezinhlobo eziningana ze-fattening, ngayinye yazo enezici zayo.
I-Highland Cow Breed
Lapho sikhiqiza imfuyo, sihlale sicabanga ngendlela yokwenza kube lula izindleko zempahla nezesikhathi zokuthola imiphumela emihle esikhathini esizayo. Kodwa ngokuvamile umphumela omuhle umphumela wendlu enkulu kakhulu, lapho kunezinqubo ezihlukahlukene zokudla, ukunakekelwa okukhethekile nokugcinwa okusetshenziselwa isilwane.
Izinkomo ze-Kakhakh ezimhlophe
Imfuyo yezinkomo iningi, futhi kunzima ukuthola phakathi kwazo ezifanele zonke izici kuwe. Ukuxazulula umsebenzi onzima kangaka kancane kancane, uma ufunde ngokuningiliziwe incazelo yezinhlobo ezithandwa kakhulu. Yilesi sigaba esithandwa kakhulu esihlanganisa izinkomo zohlobo lwezinhlobo zezinhlobo zama-white-headed Kazakh.
I-Kalmyk ukuzalwa kwezinkomo
I-Kalmyk zohlobo lwezinkomo namuhla zibhekwa njengezinhlobo ezihamba phambili zenyama yokuqondisa. Lolu hlobo lwezinkomo lungcono kakhulu ekufuyeleni imfuyo ezindaweni ezinenkinga yezulu, kepha njengoba nje kulula ukunakekela ezindaweni eziphethe isimo sezulu esilinganiselwe. Ihluke kakhulu kunenkomo enezimpande zaseYurophu, ngoba okhokho bayo yizinkomo zasendle.
Izinkomo ezibomvu zenyama
Emakhaya nasemapulazini, izinkomo zivame ukutholakala ngezinhloso zobisi. Lena akuyona yodwa isiqondiso ekukhiqizeni izinkomo, kodwa inenzuzo kakhulu futhi inzinzile ngokwemali engenayo. Ngempela, iningi lethu, ubisi nemikhiqizo yobisi yisisekelo sokudla, okukwazi ukugcwalisa umzimba ngezinto ezibalulekile kakhulu zokulandelela.
Izinkomo ezimnyama namhlophe
Mhlawumbe kuzo zonke izinkomo zezimbuzi zobisi zithandwa kakhulu. Emva kwakho konke, lezi zilwane ziyakwazi ukusijabulisa nsuku zonke nje ngezivuno zesikhala, futhi zivame ukuhamba nenyama, futhi inyama yenkomo etholakala kubo nayo inenani eliphezulu. Ngokuvamile, izinkomo ezinjengalezi ziboshwa emapulazini amakhulu anikezela ubisi bawo izitshalo ezinkulu.
Aberdeen Angus ukuzalwa kwezinkomo
Kuyinto emangalisa kakhulu, kodwa ngesizathu esithile sijwayele ukuhlukanisa izinkomo hhayi ngokuzalwa, kodwa ngombala. Yiqiniso, kumbelethi onolwazi, i-suit ingaxoxa ngezinto eziningi, kodwa abathandi bombala ngeke babe umgomo wokuhlola ukusebenza kwenkomo. Ngakho-ke, ukujwayele lesi silwane esihle kufanele siqale ngokuthi yikuphi uhlobo, futhi ngemuva kokufunda zonke izici zohlobo, ukudweba ngezici zesilwane esithile.
I-Universal high-yielding iklabishi ehlukahlukene "Isipho": izithombe, incazelo kanye neziqondiso ezinyathelo ngezinyathelo zokukhula
U-Anthurium Andre: ukunakekela ekhaya
Imiklamo ye-DIY engadini: indlela yokwenza i-ladybug (ngesithombe)
Enye yezinhlobo ezithandwa kakhulu nezintandokazi zezinkomo emhlabeni jikelele ubisi lweHolstein.
Izindlela ezi-4 ezilula zokususa iphunga ngokushesha esiqandisini ngemuva kwamaholide
Ingadi ye-Hydrangea: izinhlobo, izinhlobo, ukutshala nokunakekela
Indlela yokuphatha izinkomo ze-necrobacteriosis
Peari "Perun": izici, izimfihlo zokulima ngokuphumelelayo